မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် - Investing stock online
သင်သည်မည်သည့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ရဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက info@investingstockonline.com မှာအီးမေးလ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး
ဤဆိုဒ်ပေါ်မှာရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌သာယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။ https://www.investingstockonline.com/ ဤအချက်အလက်များ၏ပြည့်စုံ, ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အာမခံလုပ်မထားဘူး။ သင်ကဤဆိုဒ် (https://www.investingstockonline.com/) ရက်နေ့တွင်ရှာတွေ့သတင်းအချက်အလက်များအပျေါမှာယူမဆိုအရေးယူ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာတင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါတယ်။ https://www.investingstockonline.com/ ကြှနျုပျတို့၏ website ၏အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်. မဆိုဆုံးရှုံးမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကနေ, သင်ထိုကဲ့သို့ပြင်ပအင်တာနက်ဆိုက်များတွင်ရန် hyperlink များအောက်ပါအားဖြင့်အခြားသော website သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အသုံးဝင်သောနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှသာအရည်အသွေးအလင့်များပေးဖို့ကွိုးစားနေစဉ်, ကျနော်တို့ဒီဆိုက်များများ၏အကြောင်းအရာနှင့်သဘောသဘာဝကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များဤလင့်များဤဆိုဒ်များတွင်တွေ့ရှိသမျှသောအကြောင်းအရာတစ်ခုထောက်ခံချက်ဆိုလိုဘူး။ ဆိုက်ကိုပိုင်ရှင်တွေနဲ့ content အသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်နှင့်ကျွန်တော် ” ဆိုး ” ပြီရသော link တစ်ခုဖယ်ရှားပစ်ရန်အခွင့်အလမ်းများမတိုင်မီဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သင်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုစွန့်ခွာလာသောအခါအခြားသောဆိုဒ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်နေသောကွဲပြားခြားနားသော privacy ကိုမူဝါဒများနှင့်အသုံးအနှုန်းများရှိစေခြင်းငှါသတိပြုမိလိမ့်ပေးပါ။ မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်သို့မဟုတ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက် upload မပြုလုပ်မီအဆိုပါသီးသန့်လုံခြုံရေးဤဆိုဒ်များ၏မူဝါဒများအဖြစ်သူတို့၏ “ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ” စစျဆေးဖို့သေချာပါလိမ့်ပေးပါ။
ကြှနျုပျတို့၏ website အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်ဤဥပဒေကျွန်တော်တို့ရဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်သဘောတူနှင့်၎င်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုသဘောတူသည်။
ငါတို့သည်အပ်ဒိတ်လုပ်ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဤစာရွက်စာတမ်းမှမဆိုအပြောင်းအလဲများလုပ်သင့်တယ်, သူတို့အအပြောင်းအလဲများကိုအဓိကကဒီမှာ posted လိမ့်မည်။